FBC - Taphoonni Ispoortii biyyaalessaa sadarkaa isaanii kan eeggatan waan hin-ta’iniif ispoortesssitoota bakka bu’an horachuun hin-danda’amne
Taphoonni Ispoortii biyyaalessaa sadarkaa isaanii kan eeggatan waan hin-ta’iniif ispoortesssitoota bakka bu’an horachuun hin-danda’amne
Finfinnee, Caamsaa 10, 2009 (FBC) Taphoonni ispoortii biyyaalessaa sadarkaa isaanii eeganii waan hin geggeffamneef ispoortessitoota bakka bu’an horachuun akka hin-danda’amne Ministeerri Dargaggootaa fi Ispoortii ibse.
Ministeerichi waldaalee ispoortii fi Hoggantoota biiroo darggootaa fi ispoortii naannoleef dhimma taphoota ispoortii biyyaalessaa irratti qorannoo ka’umsaa geggeesse dhiheesseera.
Qorannucha keessatti akka eerametti taphoonni ispoortii biyyattii keessatti geggeffaman bu’aa barbaachisu argamsiisuu hafuusaaniif sababni inni jalqabaa sadarkaa kan hin eegganne ta’uu isaa akka ta’e eeranmeera.
Naannoon qopheessuu fi waldaaleen ispoortii wal simuu dadhabuu, gama qopheessaan gurmaa’insi koree ifa ta’e dhibuun fi kaayyoo dorgommiiwwan biyyaalessaa hubachuu hafuunis akkasuma.
Keessumaa naannolee fi bulchiinsotni magaalaa dorgommiiwwan madaallii guddattootaa sadrkaa biyyaalessaatti geggeeffaman irratti hojii manaa dursanii hin-hojjenne bu’aa qaxxaamuraan argachuuf yaaliuunsaanii qabxiin akka hir’atuuf sababa tokko ta’uu qorannuchaan adda ba’eera.
Gara fuul-duraatti Tapha ispoortii biyyaalessaa sadarkaa isaa eggate qopheessuuf hojimaata isa kanaan duraa keessaa ba’anii waldaa fi federeshinii mataa ofiin hundeessuu akka barbaachisu ibsameera. Humna faayinaansii isaanii cimsuuf ispoonsara, mirga suuraa, gurgurtaa tikeetii fi maddoota galii kaan fayyadamuun mootummaatti hirkachuu keesssaa ba’uu akka qaban qorannicha kan dhiheessan Obbo Asmaraa Gizaaw eeraniiru.
Taphoota Barattootaa Biyyaalessaa Guutummaa Itiyoophiyaa, Hirmaannaa Dargaggoota Guddattootaa fi Hirmaannaa Dubartootaa Biyyaalessaa akkasumas dorgommiiwwan idil addunyaa irratti bu’a qabeessa akka ta’anitti qophii gahaa taasisuu qabu jedhaniiru.
Ministeera Dargaggootaa fi Ispoortiitti Ministira Deetaan Damee Ispoortii Obbo Tasfaayee Yiggazuu qorannoon ka’umsaa kun hoggantoota waldaalee ispoortii fi ogeessotaan mariin erga irratti geggeffamee booda hojiitti akka seenu ibsaniiru.
Sirni Hojimaata Dorgommii Hirmaannaa Ispoortii kaleessa jalqabame guyyoota 3f kan turu yoo ta’u, danbii ramaddii sadarkaa wiirtuuwwan ispoortii, bulchiinsa ispoortii , gahee dubartootaa fi raawwii leenjii guddattootaa irratti mariin niggeeffama.
Oduuwwan Biroo « Pirimiyar Liigii: Bunni Itiyoophiyaa Magaalaa Finfinnee waliin taphata	Waldorgommiin Mo’aa Mo’attoota kubbaa miillaa Liigii Oromiyaa geggeffamaa jira »
Marii Isportii Wiixata Ebila 08 2010
Marii Isportii Roobii Ebila 03 2010